China 3003 h14 aluminium circle Manufacturer - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co, Ltd
3003 h14 kofehy aliminioma
3003 h14 kodiarana alimina dia ampiasaina betsaka amin'ny fanaka toy ny latabatra. Fa ny ankamaroan'ny kodiarana Aluminium dia nangataka ny Deep Drawing Quality Aluminum Circle. Ireo kodiarana aliminioma dia ampiasaina betsaka ao amin'ny kitchenware, cookware, reflector-light sns. Aluminium Circle SheetFeatures amin'ny Aluminium Circle ho an'ny fitaovana fikarakarana 1. Fifandimbiasam-peo maromaro momba ny haben'ny faribolana, anisan'izany ny endrika sy ny endriny; 2. Sary manintona lalina sy miloko marevaka; 3. RoHS sy ny fankatoavana ny REACH.
Famaritana: Shuanglin Jiate dia mpamokatra sy mpamatsy ny alim-bary aluminie monina any China Alloy: 1000series, 3000series. Aluminium Pure Aluminium, toa ny Alloy 1050, 1060, 1070, 1100 ary Alloy Aluminum Circle, toy ny Alloy 3003. Samy azo ampiasaina amin'ny famokarana alimina ny ala maina sy ny tsy hafanana. Iray amin'ireo mpamokatra haingam-pitaovan'ny alim-pototra indrindra any amin'ny faritra afovoan'i Sina isika, ary namorona ny kodiaran'ny alim-bary tamin'ny 5years isika, ny hatsaran-tarehintsika dia mety ho tsara ho an'ny horonam-peo lalina sy ny famoahana ny fampiasana azy. Mirehareha isika amin'ny faribolan'ny aluminium misy antsika, ny kalitao hitarika ny hoavy. We ...